Mmanụ aindụ na-ekpuchi ndị na-emepụta ihe na ndị na-eweta ya - China Honeycomb Blinds Fabric Factory
Ike oru oma straipu Cellular Shades Fabric N'ihi Home
Fabrickwà cellular na-adị ọhụrụ bụ ụdị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gburugburu na-echekwa windo mma ụlọ. Nhazi pụrụ iche na-eme ka ikuku dị na oghere oyi, nke na-eme ka okpomọkụ dị n'ime ụlọ na-adịgide adịgide ma na-echekwa ụgwọ ọkụ eletrik maka ikuku ikuku. Ya mgbochi-ultraviolet na kwes mkpuchi ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na-echebe ezinụlọ ihe, mgbochi static ọgwụgwọ, mfe asa. A na-ezobe ụdọ ahụ n'ime oghere oghere ma nwee ọdịdị zuru oke. Ọ dị mfe ma dị irè iji mee ihe karịa ákwà mgbochi ọdịnala.
Anyị na-enye ihe nlele n'efu maka ndị ahịa niile, ị nwere ike ịlele ogo ma họrọ agba ozugbo tupu iwu. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị akwa bụ ọgaranya na agba na-eso na-emekarị nke mba ejiji.
A na-eme ka ndị kpuru ìsì n'ụgbụgbọ mmanụ a accordingụ dị ka usoro nhazi mmanụ a honeyụ. Ebe ọ bụ na "ụgbụgbọ mmanụ abụ" na-etolite ihe mgbochi mgbochi pụrụ iche, ikuku na-anọ na "ụgbụgbọ mmanụ a ”ụ", na-agbakwunye uru nchekwa nchekwa na-enweghị atụ nke ákwà mgbochi ndị ọzọ. Ọdịdị pụrụ iche nke "oghere n'ụgbụgbọ mmanụ abụ" pụrụ iche nke ụgbụgbọ mmanụ a honeyụ na-eme ka nrụgide nke ime ụlọ kawanye nke ọma, na-ewepu ma na-eme ka ọ dị ọkụ, ma na -emepụta mmetụta nke ikpo ọkụ n'oge oyi na oge oyi n'oge ọkọchị. Dị iche iche ìhè transmittance akwa, n'ụgbụgbọ mmanụ abụ Ọdịdị, na agba, na ọrụ ụzọ na-eweta a dịgasị iche iche nke nhọrọ na okpukpu abụọ nke ụlọ nkasi obi.
Anyị na-enye ihe ntanetị n'efu maka gị ịlele ogo ma họrọ agba ozugbo tupu ịhazi. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị akwa bụ ọgaranya na agba na-eso na-emekarị nke mba ejiji.
Ugboro abụọ Cell Honeycomb Blinds Fabric Semi-Blackout
Mmanụ abụ na-ekpuchi ákwà bụ ụdị ọhụụ ọhụrụ nke nchebe gburugburu ebe obibi na-achọ mma ụlọ. Nhazi pụrụ iche na-eme ka ikuku dị na oghere oyi, nke na-eme ka okpomọkụ dị n'ime ụlọ na-adịgide adịgide ma na-echekwa ụgwọ ọkụ eletrik maka ikuku ikuku. Ọ na-eme ka ákwà mgbochi ọdịnala ahụ dị mfe, na-eme ka ndị mmadụ nwee echiche nke ngwa ngwa, arụmọrụ dị elu. Uru dị na ya bụ na mgbe emechiri anya mmanụ a honeyụ ahụ, ọnọdụ nke windo igbochi ahụ pere mpe, yabụ ị nwere ike nweta ohere ka ukwuu nke ohere n'ime ụlọ.
Inogide Cordless Pleated Window Blinds Fabric
Ihe mkpuchi windo na-agba agba agbawo ewu ewu na Europe. Mgbe emechara ka ha mata China na afọ ndị na-adịbeghị anya, a na-ejikarị ha eme ụlọ, ụlọ obibi na ụlọ. A na-eji ire ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-adịgide adịgide, na-adịgide adịgide ma ọ dịghị mfe nrụrụ. Ya mere, ọ dịghị mkpa iche na pleated window blinds ákwà ga-oruru mgbe na-adịgide adịgide na-atụfu ya mbụ anya. Tụkwasị na nke ahụ, nhicha na ndozi nke windo na-ekpuchi windo dịkwa mfe, ọ bụ naanị mkpa iji ájá ájá ma ọ bụ jiri draịva ntutu ma ọ bụ ihe nhicha ọkụ iji hichaa ya. Etinyela ya ma saa ya na mmiri.
Mara Mma Ma Kwes Mmanụ aeyụ Blind Fabric For Office
A na-eme ákwà kpuru ìsì n'ụgbụgbọ mmanụ a accordingụ dị ka usoro mmanụ a honeyụ. Ọ na-ekewa blackout na ọkara-Blackout usoro. Ọkara ụgbụgbọ mmanụ a honeyụ na-ekpuchi ákwà na-agwakọta ọrụ na ịdị mma nke akwa mmanụ a honeyụ na-ekpuchi ihe eji emepụta ihe eji eme ihe. Ọ bụ a mma-zuru okè window mma ngwaahịa. Mmanụ acomụ na-ekpuchi anya na-emeri adịghị ike nke ákwà mgbochi aatedụrị n'ihi mmụba nke ịdị elu na ịdị arọ nke na-eme ka edozi ahụ, nke mere na ahụ kpuru ìsì na-anọgide na-agbanwe agbanwe na agba ahụ enweghị ntụpọ.
Nchekwa mmanụ mmanụ acomụ na-ekpuchi ákwà Fabric Semi-blackout
Cellular Pleated blinds bụ ndị a ma ama na Europe. Mgbe emechara ka ha mata China na afọ ndị na-adịbeghị anya, a na-ejikarị ha eme ụlọ, ụlọ obibi na ụlọ. Uru nke Groupeve Cellular pleated blinds fabric bụ dị ka ndị a: Nguzogide akwa, ọ dịghị nkwado ọ bụla achọrọ, nkwụsị akwa akwa, oke ikuku na nguzogide iji mee ihe ugboro ugboro. O nwekwara nguzogide uzo di nma karia ihe eji eme ya, karie ihe nchacha nma. Shading, nnyefe ọkụ na ikuku.
Ihe nhicha ahụ na-ekpuchi ákwà na-ekpuchikwa cellular dịkwa mfe, naanị na ọ ga-eji ájá ájá ma ọ bụ jiri ntutu isi ma ọ bụ ihe nhicha nhicha hichaa ya. Etinyela ya ma saa ya na mmiri.
Factory Price kwụ Dual Shades n'ụgbụgbọ mmanụ acomụ Fabric N'ihi Office
Mmanụ abụ na-ekpuchi ákwà bụ ụdị ọhụụ ọhụrụ nke nchebe gburugburu ebe obibi na-achọ mma ụlọ. Shapedị nke ụgbụgbọ mmanụ a blindụ nke Groupeve dị mfe ma ụdị ahụ bara ọgaranya, na-enye ndị ọrụ ohere ịhọrọ dị ka mkpa nke oghere na ikuku, na -emepụta ọgaranya ohere maka ụlọ. Ọrụ mkpuchi mkpuchi dị mma na-eme ka ime ụlọ ahụ dị jụụ ma dịkwa mma. A na-emeso akwa mmanụ a honeyụ na oke okpomọkụ ma ọ dịghị agbanwe agbanwe, a na-agwọkwa ya site na nsị na mgbochi na-egbochi ọgwụgwọ, dị mfe ihicha.
Ejiji na nkenke okpukpu okpukpu abụọ nke nkpuchi kpuru ìsì
Mmanụ abụ na-ekpuchi ákwà bụ ụdị ọhụụ ọhụrụ nke nchebe gburugburu ebe obibi na-achọ mma ụlọ. Nhazi pụrụ iche na-eme ka ikuku dị na oghere oyi, nke na-eme ka okpomọkụ dị n'ime ụlọ na-adịgide adịgide ma na-echekwa ụgwọ ọkụ eletrik maka ikuku ikuku. Ọ nwekwara sistemụ pụrụ iche, arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya na ịrụ ọrụ dị mma. Uru dị na ya bụ na mgbe emechiri anya mmanụ a honeyụ ahụ, ọnọdụ nke windo igbochi ahụ pere mpe, yabụ ị nwere ike nweta ohere ka ukwuu nke ohere n'ime ụlọ.
Free Sample Cordless Cellular Shade Fabric 20mm
Cellular shades abụwo ewu ewu na Europe. Mgbe emechara ka ha mata China na afọ ndị na-adịbeghị anya, a na-ejikarị ha eme ụlọ, ụlọ obibi na ụlọ. Imirikiti akwa ákwà cellular na-eji akwa a na-emeghị ya, elu ya dịkwa larịị, nke nwere mmetụta nke anti-ultraviolet, ájá na mmiri. A na-eji akwa pụrụ iche na-edozi akwa cellular ahụ iji gbochie ọkụ eletrik dị jụụ, ntu oyi, na mmiri, ọ dịghịkwa mfe ikpokọta ájá na ebù, ọ dịkwa mfe ihicha ma debe ya.
Ogo nke akwa cellular dị mma, ma enwere agba dị iche iche a ga-ahọrọ. Free samples nwekwara maka ị na-elele àgwà na họrọ agba ozugbo tupu iji.
Okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ Soundproof Honeycomb Blinds Fabric Semi-Blackout
Mmanụ abụ na-ekpuchi ákwà bụ ụdị ọhụụ ọhụrụ nke nchebe gburugburu ebe obibi na-achọ mma ụlọ. Nhazi pụrụ iche na-eme ka ikuku dị na oghere oyi, nke na-eme ka okpomọkụ dị n'ime ụlọ na-adịgide adịgide ma na-echekwa ụgwọ ọkụ eletrik maka ikuku ikuku.
Uwe ahụ na-emegide Kraịst, ọ naghị agbasasị ihe ndị siri ike na ikuku, ọ naghị agbasakwa uzuzu.
Ogo ya na-adịgide adịgide, ihe nke akwa ahụ na-ekpebi na ọ gaghị edozi ya ma ọ gaghị agbanwe agbanwe, ọ ga-echekwa mbadamba ya ruo ogologo oge.
Mmanụ acomụ na-ekpuchi akwa nhicha dịkwa mfe, naanị mkpa iji ájá ájá ma ọ bụ jiri ntutu isi ma ọ bụ ihe nhicha nhicha hichaa ya. Etinyela ya ma saa ya na mmiri. Akwadoro ka ọkpọọ ntutu site na ikuku oyi.
Ihe eji eme ọgbara ọhụrụ n'ụgbụgbọ mmanụ a Pụ gbara ọchịchịrị maka ụlọ nri
Ihe ndị ahụ kpuchiri anya dị mma maka ime ụlọ ihi ụra, ime ụlọ, ime ụlọ ọmụmụ, ime ụlọ erimeri, ime ụlọ na ebe ndị ọzọ. A na-eme ka ákwà kpuru ìsì mara mma nke ọma site na imepụta ụlọ kachasị mma n'ụwa - na-emepụta ụgbụgbọ mmanụ a honeyụ. Ngwurugwu mmanụ a uniqueụ pụrụ iche nwere ike ịmepụta akwa mgbochi pụrụ iche na oghere "ụgbụgbọ mmanụ a ”ụ" Ka ikuku nọrọ na "bee olulu" (ikuku static oyi akwa), rụọ ọrụ nke ọma na nguzozi nke okpomọkụ nke ime ụlọ, mkpuchi ikpo ọkụ na ọkụ, ma mepụta jụụ oge ọkọchị na udu mmiri oyi.
New Design N'ogbe Honeycomb Organ Curtain Fabric 38mm
Organ ákwà mgbochi ma ọ bụ blinds emewo na-ewu ewu na Europe. Mgbe emechara ka ha mata China na afọ ndị na-adịbeghị anya, a na-ejikarị ha eme ụlọ, ụlọ obibi na ụlọ. Ngwunye ngwa ngwa akwa nhicha dị ezigbo mfe, mana biko rịba ama na enweghị ike iji usoro ahụ eme ihe na-ezighi ezi, anyị na-achọkarị iji ájá ájá ma ọ bụ ngwaọrụ nhicha dị nro. Ma ọ bụ jiri onye na-ehicha ntutu ma ọ bụ onye na-ehicha ihe iji hichaa ya. Etinyela ya ma saa ya na mmiri. Akwadoro ka ọkpọọ ntutu site na ikuku oyi. Jiri akwa dị nro ma ọ bụ sponge moistened na mmiri ọkụ hichaa ákwà mgbochi. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, tinye akwa nro dị nro, hichaa nwayọ iji gbochie ịba nhịahụ.